Isitulo, iStool, iPouf, iTafile, iSofa- ifenitshala ye-Dcl
Inkxaso yomnxeba 86-13682157181
Itafile yesidlo sangokuhlwa
IStool S026A, S026B
Isihlalo se-PP esinemigca emnyama yeCoal Metal
ILounge Sofa, iSihlalo seLounge, Sihlalo seengalo
Iplastiki yomthi weplastikhi yomthi weplastiki, iinyawo zentsimbi ...
Uyilo lwale Sofa lokuhlala namhlanje
Ukutya kwitafile enezitulo ezi-6
INTSHAYELELO KWINQAKU LENKCAZO yeDCL
Ifektri ye-DCL yasekwa kwaye yasekwa ngu-HaiCui kwidolophu yase-Shengfang, kwisiXeko saseBazhou ngo-Okthobha ka-2013. Sizabalazela ukwanelisa imbonakalo yomthengi wendawo, intuthuzelo kunye nobuhle ngoyilo lobuchule kunye nolawulo olungqongqo lomgangatho.
Umzi mveliso weDCL ubukhulu becala uvelisa isihlalo sokutya, itafile yokutyela, iStool, iPouf, iSofa kunye neOttoman. Sinabathengi abaphambili abathengisi, abathengisi kunye nentengiso ye-Intanethi evela eYurophu, kuMantla nakuMzantsi Melika nakuMbindi Mpuma.
Isebe le-R & D yeyona mpumelelo iphambili kunye neyona njongo iphambili yeMveliso yeDCL, eyenza ezinye zeembono eziqaqambileyo ziyinyani. Uyilo lwethu oluphambili luvela kwimibono yabathengi kunye nendalo yethu. Ngeli xesha, iDCL yapasa i-BSCI kwaye iimveliso zethu zafumana isiqinisekiso se-FSC ngo-2018.
Ifilosofi yomzi mveliso weDCL ijolise kumgangatho kwaye amaxabiso e-premium aya kubakho ngelixa kugcinwa umgangatho ozinzileyo kunye nomgangatho olungileyo. Ndiyathemba ukuba siya kuziphatha njengomlingani onyanisekileyo nothembekileyo kunye nomthengisi ukuba ngaba likho ithuba lokusebenza nawe. Wamkelekile ukusityelela kwaye sijonge phambili ekukhonzeni.
Bazhou City Dcl fanicha Co, l.
Ungayikhetha njani izihlalo kwiTheyibhile yokuDla
Nantsi indlela yokukhetha izitulo kwitafile yakho yokutyela: Isikali sokuthuthuzela, amanqanaba afanelekileyo etafile yakho yokutyela nezitulo kufuneka zihambelane. Ukuba ulinganisa ukusuka phezulu kwetafile ukuya ezantsi, uninzi lweetafile zokutyela ukusuka ku-28 ukuya kwi-31 inches ukuphakama; Ukuphakama kwee-intshi ezi-30 yeyona nto ixhaphakileyo. Fr ...
Yintoni isitulo esinyakazayo esisetyenziselwa? Isifo samathambo edabini kunye nentlungu yangasemva Kuyatshiwo ukuba owayesakuba nguMongameli wase-US uJohn F Kennedy wayedla ngokusebenzisa isitulo esixhokonxayo ukunciphisa iintlungu zakhe zasemva. Sebenzisa isitulo esixhokonxa inyusa ukuhamba kwegazi emzimbeni wonke, ngaloo ndlela kuthumela ioksijini ngakumbi kumalungu, anokuthi ancede ...
Siqhubeka nokuhamba ngexesha le-COVID-19 lenzekile
Ngokulawulwa okutsha kwe-Covid-19 e-China, iifektri ezininzi ziphinde zavula kwaye zaqala ukuvelisa kwakhona ngokulandelelana. Abanye babathengi bethu bazama konke okusemandleni abo ukuqhuba ishishini, bade basebenze ekhaya. Yinto entle eyomntu wonke, sonke siyakholelwa ukuba izinto ziy ...
Izitulo, izitulo, iitafile, igumbi lokuhlala, iisofa kunye namashalofu
Iimveliso ezenziwe ngokwezifiso.Inenkonzo ethembekileyo emva kwentengiso
Umgangatho yinkcubeko yethu
Adress: Intshona yendlela ye-langda, ilali iFengliu, idolophu yaseShengfang, isixeko saseBazhou, iphondo laseHebei, China.